12 Most Beautifulque Makomo In Europe | Save A Train
musha > Travel Europe > 12 Most Beautifulque Makomo In Europe
Chitima Kufamba, Rovedza Kufamba Austria, Train Travel Czech Republic, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Rovedza Kufamba Italia, Chitima Kufamba Luxembourg, Chitima Kufamba Switzerland, Chitima Kufamba UK, Travel Europe
Nguva yekuverenga: 7 maminitsi
(Last Updated On: 24/05/2021)
Kubva kune wese munhu anodikanwa bhaisikopo Europe's “zvikomo zvinogara mumutinhimira wenziyo”. Zvirokwazvo zvinotevera 12 makomo achaita kuti iwe uimbe uye mwoyo wako utambe. Kubva kuAlps inozivikanwa uye Pyrenees kusvika ku matombo anokosha akavanzwa yeCzech Republic, Joinha isu pakufamba kuenda ku 12 makomo akanaka kwazvo muEurope.
Rail Transport Ko The Eco-Friendly Way To Travel. Nyaya iyi yakanyorwa kudzidzisa pamusoro Train Travel neSave A Train, The Akachipa ezvitima Matikiti Webhusaiti Munyika.
1. Matterhorn Gomo MuSwitzerland
Kubva kuGornergat kuenda kuRothorn makomo emakomo, Matterhorn inogona kuyemurwa kubva chero kupi muZermatt. Matterhorn chando chivharo uye chimiro chayo chetatu, gadzira zvisingatendeseke zvinoyevedza zvemakomo maonero.
Muchirimo kana muchando, Matterhorn inozivikanwa inzvimbo inoshamisa yezororo mumakomo. Unogona kuwana Matterhorn muSwitzerland Alps uye sarudza pakati kukwira kumusoro 4,478 mamita, kukwira munzira inozivikanwa zvikuru kubva kuZermatt kuburikidza neHornli Hut.
Matterhorn kukwira ndeimwe yenzvimbo dzinoyevedza muEurope, yakadzika muma green meadows eSwitzerland. saka, iwe unenge uine akawanda mavara emakwenzi akanaka uye kubata mweya wako uchiyemura runako rwechisikigo.
Basel kuInterlaken Nechitima
Geneva kuZermatt Ine Chitima
Bern kuZermatt Ine Chitima
Lucerne kuenda kuZermatt Ine Chitima
2. Jungfrau MuLauterbrunnen Valley, Siwizarendi
Mumupata wakanaka weLauterbrunnen uye iyo nyika ye 72 mapopoma, iwe uchawana yakaisvonaka Jungfrau makomo renji. pa 4,158 mamita, Jungfrau ndiro gomo rakakwirira kwazvo muBernese Alps.
zvakare, unogona kusarudza kukwira kana kunakidzwa naka Jungfrau makomo maonero kubva kumusoro-soro chitima muEurope. Kubva kune rumwe rutivi Mittelland kusvika kuVosges, uye iyo Aletsch glacier kune rumwe rutivi, kufema chaiko.
Lucerne kuenda kuLauterbrunnen Ine Chitima
Geneve kuna Lauterbrunnen Ane Chitima
Lucerne kuInterlaken Nechitima
Zurich kuInterlaken Nechitima
3. Grossglockner MuEast Tyrol, Ositiriya
Gomo repamusoro reGrossglockner rakakomberedzwa 266 madiki marefu mune inonzi denga reAustria. Iyi gomo renzvimbo inogadzira imwe yeanoyevedza maonero emakomo muEurope. Grossglockner anomira akareba pa 3,798 mamita, uye Grossvenediger pa 3,666 mamita, kugadzira imwe yemakomo anoyevedza maonero muAustria.
Uchawana izvi 2 hofori muHohe Tauren national Park. Pano iwe unogona kuenda kumakomo kuchovha, kukwira kana kukwira matombo. Nenzira iyi unogona kuyemura iwo anoyevedza maonero kubva chero kona.
Vienna kuLandeck Ischgl Ine Chitima
Munich kuLandeck Ischgl Ine Chitima
Salzburg kune Landeck Ischgl Ine Chitima
Zurich kune Landeck Ischgl Ine Chitima
4. Most Beautifulque Makomo In Europe: Yakakwira Dachstein Mu Ositiriya
Gomo rechipiri rakakwirira muAustria ndiHoher Dachstein, iri mune inonakidza Halstatt guta. Hoher Dachstein inopa akanakisa emakomo uye edziva maonero munguva yechando uye zhizha. Muzhizha, iwe uchafarira iro rakasvibira uye rinotumbuka gomo rekarst. In yechando, enda uchitsvedza kubva pamusoro pegomo.
zvisinei, makomo anoyevedza anoonekwa muHallstatt anofanirwa kunge ari pa 5 Minwe poindi yeLake Hallstatt. Kana iwe uri kushanya kubva Kubvumbi kusvika Gunyana, pfeka nharaunda dzinodziya dzechando, sezvo kuchiri kugona kuita sinou uye kutonhora panguva ino yegore. Iwe unogona kusvika kune ino inoshamisa maonero necable mota kunze kwekunge iwe uchida kukwira munzira yose kuenda kune imwe inogutsa uye inonakidza chiitiko.
Munich kuHallstatt Ine Chitima
Innsbruck kuHallstatt Ine Chitima
Passau kuHallstatt Ine Chitima
Rosenheim kuHallstatt Ine Chitima
5. Chamonix-Mont-Blanc, Furanzi
Iyo Chamonix igomo rakakwirira kwazvo muAlps. Just 15 maminetsi kubva kumuganhu, Chamonix inoshamisa yechando. pano, iwe uchapepereswa nekubva kune anoyevedza maonero eMont Blanc.
Unogona kuita chitima cheMont Blanc, kana kuyemura anoyevedza maonero kubva kumakamuri uye maresitorendi muChamonix dhorobha. Pamusoro pe, unogona kukwira kuenda kuAiguille du Midi kana kuMer du Glace. Chero chiitiko chaunosarudza, anoyevedza makomo maonero eimwe anoyevedza makomo muFrance achange achiperekedza iwe kwese.
Lyon kuNice Nechitima
Paris kuNice Ine Chitima
Cannes kuenda kuParis Nechitima
Cannes kuLyon Nechitima
6. Most Beautifulque Makomo In Europe: The Pyrenees
Iyo yakaisvonaka Pyrenees inopa akanakisa maonero emakomo. Makomo manomwe aya ari muFrance, Vosges, Jura, iyo Massif Central, iyo Armorican Massif, uye yeCorsican Massif.
Iri gomo renzvimbo rakakura zvekuti unozofanirwa kukwira kubva kuAtlantic Ocean kuenda kugungwa reMediterranean. Kwete chete iwe unozogona kushanyira inonakidza mweya zvekare, asi iwe zvakare uchave nemukana unokosha wekuyemura chimwe chishamiso chechisikigo. Ichi chishamiso ndechechokwadi iyo Grande Cascade de Gavarnie kana Gavarnie mapopoma. Nedonhwe re 422 mamita, ndiyo yechipiri-yakakwira mapopoma muEurope.
saka, yako pics ichave yakanyatso kuve National Geographic yakakwana.
7. Most Beautifulque Makomo In Europe: Val Thorens MuFrance
Kumusoro kumusoro 2300 Mamita muFrance Alps, makomo echando eVal Thorens ndiwo makomo anoyevedza kwazvo munguva yechando. Slide the slopes, kuva nekapu yecocoa inopisa nemoto, kana kunakidzwa nemaonero kubva kune tambo mota, izvo zvinotapira zvinofadza kwazvo.
zvisinei, nepo vazhinji vachienda kuVal Thorens kweski, inonakidza kwazvo mune chero imwe mwaka. Tarentaise Valley izere nedzimba dzinonakidza dzemakamuri, mafuro, uye rwizi Isere, nemakomo eVal Thorens kumashure, gadzira nzvimbo dzinoyevedza kuyemura gore rese.
Amsterdam kuParis Nechitima
London kuParis Ine Chitima
Rotterdam kuParis Nechitima
Brussels kuParis Nechitima
8. MaDolomites MuItari
Paunogona kusarudza kubva 7 maonero ekuona, nzvimbo yacho inoshamisa zvechokwadi mumamiriro ezvinhu epasi. Makomo eDolomites anotarisana neSouthern Italy, ndeimwe yenzvimbo dzakanakisa dzekuchengetedza zvisikwa muEurope. Uyezve, ndiyo imwe yenzvimbo dzinozivikanwa kwazvo dzekufamba mushe pasirese.
Iwe unogona kusarudza kuyemura maDolomites parwendo rwezuva kubva kuBolzano, kana padenderedzwa makiromita makumi maviri rwendo. Zviitwa, pikiniki uye mavara emifananidzo, uye Hiking mudungwe munzira, haaperi. Kupfuura zvese, maonero acho anoshamisa chose, chero nguva parwendo rwako.
Nezvikonzero zvese zvakanyorwa pamusoro, maDolomites ndiyo inzvimbo yakanakira zororo mumakomo eItari.
Milan kuenda kuVenice Nechitima
Florence kuVenice Nechitima
Bologna kuVenice Iine Chitima
Treviso kuVenice Nechitima
9. Most Beautifulque Makomo In Europe: Gomo reSnowdon MuWales
Gomo reSnowdon rakanakisa zvekuti hazvishamise kuti rine yavo yekufamba app. Snowdon iri muWales, uye mushure me 6-8 kukwira kwemaawa, iwe unogona kuyemura anokatyamadza maonero eSnowdonia, Anglesey, Pembrokeshire, uye Ireland.
Pamusoro pe, kubva pakakwirira 1085 mamita, iwe uchakwanisawo ona makungwa ese akanaka. Semuyenzaniso, iro Cwellyn nyanza neMynydd Mawr vanopa zvinoyevedza pamagumo edziva Cwellyn nzira.
10. Adrspach-Teplice MuCzech Republic
Czech Republic inonyanya kuzivikanwa yePrague yakanaka. Vashoma kwazvo vanoziva nezve inoshamisa Bohemia uye dombo musha, Adrspach-Teplice. Adrspach iri padhuze nemuganhu wePoland uye inokodzera nzvimbo pa Zvishamiso zvemuEurope zvinoshamisa.
Adrspach-Teplice musha wakavakwa pakati pekuumbwa kwedombo, simudza yakareba, ne labyrinths, rwizi rweorenji, uye nzira. Iyi inonakidza nzvimbo yakawanikwa mu 1824. Kubva ipapo kwave kuve kwakakosha kuenda kune vafambi vanotsvaga zvinoshamisa.
pano, iwe unogona kufamba iyo loop nzira, kuburikidza negedhi reGothic uye nzira dzakavanzika. Iko hakuna kuita sekuyemura kunoshamisa kwedombo maficha kubva mukati uye kusvika kune bhuruu nyanza. Sezvo iwe uchange uchifamba mukati memoyo wedombo mahombe, zvakanaka kushanyira muzhizha, kana mazuva akareba uye paine mwenje wakawanda.
Nuremberg kuPrague Nechitima
Munich kuPrague Nechitima
Berlin kuPrague Nechitima
Vienna kuenda kuPrague Nechitima
11. Dunhu reMullerthal MuLuxembourg
Nevamwe ve maonero akanaka kwazvo muEurope, makomo eMullerthal muLuxembourg anopa nzira dzinoyevedza uye nzvimbo dzakavanzika dzakavanzika. Paunenge uchifamba kupinda mumasango, apfuura makungwa nematsime, makomo matombo akasvibira, iwe uchaona kuti wapinda mungano yevana.
Mullerthal dunhu rine mamwe akasarudzika masisitimu uye maonero muEurope. nematende, mumapako, mabhiriji, uye nzizi dzemvura, kune anoyevedza maonero chero kwaunotarisa. saka, kukwira kana kuchovha bhasikoro, iva nechokwadi chekugadzira kana mashoma mazuva, kuyemura anoyevedza makomo maonero eMullerthal.
Luxembourg kuenda kuColmar Nechitima
Luxembourg kuBrussels Ine Chitima
Antwerp kuLuxembourg Ine Chitima
Metz kuLuxembourg Ine Chitima
12. Most Beautifulque Makomo In Europe: Stanserhorn, Siwizarendi
Makomo echando, zvikomo zvakasvibirira, nedzimba diki dzinoyevedza mumupata, maonero kubva kuStanserhorn ndiwo anodisisa. Gomo rakaisvonaka reStanserhorn rakarurama 20 maminetsi kubva kuLucern nechitima uye anoita rwendo rwakanaka rwezuva mukati yakanaka Switzerland.
Pano unogona kutora tambo mota kukwira pamusoro pegomo kune anoshamisa panoramic maonero eSwitzerland Alps nemadhamu. Imwe nzira huru yekuyemura maonero anoyevedza emakomo eStanserhorn nekutora a nzvimbo yepikiniki. Nenzira iyi iwe unenge uri kushandisa zuva uchizorora uye kufema mune runako uye Alps’ mweya mutsva.
Zurich kuLucerne Ine Chitima
Bern kuLucerne Nechitima
Geneva kuenda kuLucerne Nechitima
Konstanz kuenda kuLucerne Nechitima
pano pa Save A Train, tichafara kukubatsira kuronga yako zororo kune iyo 12 Most wakajeka makomo muEurope nechitima.
Iwe unoda kusimbisa yedu blog positi "12 Akawanda Anoshamisa Makomo MuEurope" kupinda yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsn%2Fmost-picturesque-mountains-europe%2F‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, iwe unowana edu anozivikanwa nzira dzechitima - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml.
Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kushandura / kuti ru to / ja kana / of uye mimwe mitauro.
Netsons.ninja Makomo Mountains MountainViews Zvakanakisa PicturesqueMountains Scenicview
Ndiri munyori ane shungu, anotyisa wega mufambi uye blogger. Ini ndinotenda kuti mutauro uye mazwi zvishandiso zvine simba zvinogona kukurudzira nekugadzira nyika nyowani. Ndinoda kufamba uye kugovana nzendo dzangu kuburikidza nenyaya dzangu nevamwe vakadzi kutenderera pasirese - Unogona baya pano ndibate
Chii The Best Vintage Stores In Europe
Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Rovedza Kufamba Spain, Chitima Kufamba Switzerland, Train Travel The Netherlands, Travel Europe
Rovedza Kufamba Austria, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Chitima Kufamba Hungary, Rovedza Kufamba Italia, Rovedza Kufamba Matipi, Travel Europe
Chitima Kufamba, Rovedza Kufamba Belgium, Rovedza Kufamba Britain, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Train Travel Holland, Train Travel The Netherlands, Rovedza Kufamba Matipi, Chitima Kufamba UK, Travel Europe